QM oo ka mamnuucday Dekadaha Caalamka 4-Markab oo ku xadgudbay Cunaqabataynta Waqooyiga Kuuriya. – Balcad.com Teyteyleey
QM oo ka mamnuucday Dekadaha Caalamka 4-Markab oo ku xadgudbay Cunaqabataynta Waqooyiga Kuuriya.
Qaramada Midoobay ayaa ka mamnuucay afar Markab inay tagaan dekedda caalamiga ah, kadib markii lagu helay inay jabiyeen cunaqabatayntii lagu soo rogay Waqooyiga Kuuriya.
Hugh Griffiths, oo ah isku-dubaridaha guddi Qaramada Midoobay ah oo ku saabsan cunaqabataynta Waqooyiga Kuuriya, ayaa ku tilmaamay tallaabo aan horey loo arag.
Maraakiibta ayaa lagu soo waramayaa inay kala yihiin: Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 iyo Jie Shun. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayaa cunaqabteyn ku sameeyay waqooyiga Kuuriya Bishii hore si wax looga qabto baaritaanka lixaad ee ugu weyn ee Pyongyang.
Mamnuucidda ayaa la shaaciyay kadib kulan ay yeesheen Qaramada Midoobay Isniintii, Mr Griffiths, oo ka hadlay kulanka kadib markii lagu eedeeyay cunaqabateynta saaran North Korea, ayaa sheegay in maraakiibta laga helay “gaadiidka mamnuuca ah”.
Griffiths, ayaa sheegay in xayiraaddaas, oo dhaqan galisay 5-ta Oktoobar, ma aysan dhicin hanti ma guurto ama mamnuucid safarka.
Sida laga soo xigtay shabakadda MarineTraffic, xogta badda ee ilaalisa dhaqdhaqaaqa maraakiibta, Petrel 8 ayaa ka diiwaangashan Comoros, Hao Fan 6 ee Saint Kitts iyo Nevis, iyo Tong San 2 ee North Korea. Dalalka diiwaan gashan Jie Shun kuma jiro.
Bishii Agoosto, QM ayaa mamnuucday dhoofinta dhuxusha, badda iyo macdanta birta ee Waqooyiga Kuuriya. Xayiraadda ayaa la ballaariyay bishii hore si loogu daro dhoofinta dharka iyo shaqaalaha Waqooyiga Kuuriya, iyo sidoo kale xarig ku salaysan soo saaridda saliidda.
Xoojinta xayiraadaha ganacsiga ayaa la socday Pyongyang baadhitaankii lixaad ee Nukliyeerka iyo joojinta laba rakaab oo Japan ah.
Waqooyiga Kuuriya oo ah dal ganacsi balaaran la leh dhaqaalaha Shiinaha ayaa saxiixay tallaabooyinka, oo ay weheliso Ruushka. Labada hore ayaa horey u mamnuucay ciqaab adag oo ku aaddan xaaladda qarsoodiga ah.
Dhoofinta dhuxusha, macmacaanka iyo walxaha kale ee caanaha ah ee shiinaha ayaa ah mid ka mid ah ilaha Waqooyiga Kuuriya ee ilaha dhaqaalaha dibadda. Qiyaasaha ayaa sheegaya in North Korea ay dhoofinayso $ 3bn qiimaha alaabta sannad kasta – ciqaabtuna waxay ka tirtiri kartaa $ 1bn ee ganacsigaas.
Si kastaba ha ahaatee, cunaqabateen soo noqnoqday ayaa ilaa iyo haatan ku fashilantay inay joojiso Waqooyiga Kuuriya in ay sii waddo barnaamijyada horumarinta nukliyarka iyo Gantaalada.
The post QM oo ka mamnuucday Dekadaha Caalamka 4-Markab oo ku xadgudbay Cunaqabataynta Waqooyiga Kuuriya. appeared first on Ilwareed Online.
Francisco Madeira””AMISOM ma yeeli doonto in Al-Shabaab ay diidaan gar-gaar la gaarsiiyo dadka macaluulsan”